Buraannews.com » Afhayeenka Madaxtoodayada Somaliland Oo Beeniyey Inay Xukuumaddu Wax Xidhiidh Ah La Leedahay Urur-Siyaasadeedka Waddani Home Warar
Afhayeenka Madaxtoodayada Somaliland Oo Beeniyey Inay Xukuumaddu Wax Xidhiidh Ah La Leedahay Urur-Siyaasadeedka Waddani
September 21, 2012 - Written by reporter1 - Edited byreporter1 Afhayeenka Madaxtoodayada Somaliland. Axmed Maxamed Saleebaan (Dhuxul), ayaa beeniyey hadallo ka soo yeedhay guddoomiye xigeenka sadexaad ee xisbiga UCID Calil Maxamed Yuusuf (Cali Gurey) oo shalay sheegay inay xubno wasiirro ka tirsan xukuumaddu ay dabada ka riixayaan ururka WADDANI oo ay u shaqeeyaan.
Afhayeenka Madaxtooyada Somaliland waxa uu hadalkan ka sheegay mar uu galabta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Hargeysa, waxanuu sidoo kale sheegay in wasiirrada xukuumadu ku mushquulsan yihiin hagida iyo fulinta xilalka wasaaradaha dalka ee uu Madaxweynuhu u igmaday, waxaanuu yidhi “Runtii waxaan doonayaa inaan jawaab kooban ka bixiyo hadalo aan sal laheyn oo beryahan ku soo baxayey warbahinta qaarkood oo lagu sheegay in xubno ka mida wasiirrada xukuumada hawl aanay ku jirin la doonayo in lagu shaan-badeeyo,arrintaasi oo ah sal iyo raadtoona lahayn,”
Afhayeenku waxa uu sheegay in Madaxweyne Siilaanyo uu markii uu tallada dalka la wareegay fuliyay inuu balaadhiyo saaxadda siyaasada isagoo arrintaasi ka hadlayayna wuxuu yidhi “Madaxweynaha Somaliland markii uu talladda dalka ku guulaystay waxa uu fuliyay mid ka mid ah balamihii uu ummadda u qaaday oo ahayd in la balaadhiyo saaxadda siyaasadda. Waxaanu furay ururada siyaasadda. Taasina waxay noqotay mid lagu guulaystay, Waxa dhacday in gudoomiye xigeenka saddexaad ee xisbiga UCID Muj.Cali Maxamed Yuusuf uu beryahan warar uu warbaahinta siinayey ahaayeen xubno wasiirro ah ayaa dabada ka riixaya urur siyaasadeedka WADANI, marka hore waxaa leeyahay musuuliyiintaas wasiirrada ah jid dheer oo mucaaradnimo ah way soo mareen, sabab ay dib ugu noqdaan mucaarid dambe oo ah raadkii ay shalay ay ka yimaadeen sabab dib ay ugu noqdaan mataalo, Waxaanay wasiirradu ku mashquulsan yihiin taa Cali sheegay mid ka duwan oo ah hagida iyo fulinta siyaasada madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), sidii looga midho dhalinlahaa,”ayuu intaasi raaciyay.
Afhayeenka madaxtooyda Mr. Dhuxul, waxa sheegay inay xukuumada u siman yihiin isla markaana aanay kala xigtaysanayn dhamaan xisbiyada iyo ururda dalka ka jira, isagoo arrintaasi ka hadlayayna wuxuu yidhi “Xukuumadda ururada iyo xisbiyadda mucaaridka ahi way u siman yihiin aragti isku mid ah ayaanan ka qabnaa oo waxaanu u naqaanaa xisbiyo iyo ururo mucaarid ah. Ururka WADDANI ee la sheegayaana waa mucaarid kuwa kalena waa mucaarid. Haddii axsaabta qaarkood ay wax ka qabaan sharci ahaan inuu Guddoomiyaha Wakiiladdu isku hayo laba xil, waxa haboonayd oo daw ahayd inay maraan dariiqa sharciga ah iyo maxkamadaha. Laakiin sabab ay xukuumaddu u taageeri kartaa ma jirto, Cali Guray hore waxa uu u ahaa Xisbiga KULMIYE gabo-gabadii guushiina wuu ka baxay oo wuxuu galay UDUB waana laga guulaystay. Ka dibna UDUB-na wuu ka sii baxay oo UCID ayuu galay, UCID-na inuu sii dhaafo waa laga yaabaa. Markaa waxaan leenahay Cali Guray xukuumadda iyo Wasiirradu hawl sidaad u fulayso ka weyn ayay ku jiraan. Qarankani maanta waxa uu u baahan yahay hiilimaad iyo horumarin ayuu u baahan yahay. Waxay maanta xukuumaddu ka fikiraysaa sidii ay waxqabad shacbigu ku naaloodo inay hirgaliyaan. Labadii sanadood ee xukuumaddani xilka haysay wixii u qabsoomay shacbiga Somaliland way ka dheregsan yihiin, Xisbiyadda mucaaridka ahna waxa naga dhaxeeya tartan xalaal ah. Waxa kale oo xukuumaddu ku mashquulsan tahay hagaajinta saaxadii dimuqraadiyada hagaajin lahayd ee lagu tartami lahaa. Aragtida xukuumadduna waa inay dalka ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ahi”
Buraannews.com/Hargeysa Comments are closed.